Fandraisana ny mailakao amin'ny Inbox | Martech Zone
Fandraisana ny mailakao amin'ny Inbox
Alarobia 17, 2011 Alarobia, Oktobra 26, 2011 Douglas Karr
GetResponse dia namoaka tsotra Sary torohay manome ny mpivarotra fahalalana momba ny fanatsarana ny fandefasana mailaka ary a whitepaper momba ny lohahevitra ihany koa.
Avy amin'ny GetResponse: Fantatrao ve fa raha ny fikarohana natao vao haingana nataon'ny MarketingSherpa, mailaka iray amin'ny enina dia tsy hahatratra ny toerana alehany - izany ny boaty fisoratana anarana? Ireo izay tsy ho voasakana tamin'ny sivana spam, ka na ny maodely mailaka tsara tarehy indrindra eto an-tany aza tsy misy ilana azy. Ny vaovao tsara dia, azo ovaina izany. Ary miaraka amin'ny zavatra niainantsika tamin'ny fanomezana + fahafaha-manome 99%, hainay ny manova azy. Mazava ho azy, tianay ho fantatrareo koa. Ka dia nahita "lisitra fohy" amin'ireo dingana tena ilaina izahay ary nanapa-kevitra mihitsy aza ny hanao azy io ho "namana-namana" kokoa. Toa tonga lafatra ny sary iray.
Vao haingana izahay no nihaona tamin'ny orinasa iray izay nandefa ny mailak'izy ireo avy tao amin'ny rafitr'izy ireo manokana ary tsy nahafantatra ny sasany amin'ireo tombontsoa azo avy amin'ny fampiasana mpanome tolotra mailaka. Ireto misy vitsivitsy:
Ireo mpamatsy tolotra mailaka dia manana dingan-dàlana fitantanana. Imbetsaka, ny mpampiasa dia manana boaty inbox feno na mandeha vetivety ny mailaka ataon'izy ireo. Ny ESP dia hamerina handoa ny mailaka rehefa misy malefaka mamono sy miaro ny orinasanao amin'ny alàlan'ny famandrihana ireo adiresy mailaka miaraka amin'i mafy bounces (izany hoe tsy misy ny adiresy mailaka).
Ireo mpamatsy tolotra mailaka dia manana tatitra. Na dia manakana ny fahafaha-mahita na manokatra ny mailakao aza ireo manakana ny sary, ny fisokafana ary ny fandrefesana ny tahan'ny tsindry amin'ny rohy dia afaka manampy ny orinasanao hanatsara ny atiny na ny endriny amin'ny alàlan'ny fanomezana fampahalalana lehibe momba ny fanaovana tatitra.
Ireo mpanome tolotra mailaka dia mahafeno fepetra mifehy ny fandefasana mailaka sy ny fiainanao manokana momba ny angona. Ny fanitsakitsahana ny hetsika US CAN-SPAM na ny torolàlana Eoropeana Eoropeana 2002/58 / EC (manokana Andininy 13) dia mety hitarika adiresy IP voatanisa lisitra, na sazy ratsy fanitsakitsahana tena izy. Ny fampiasana ESP mendri-piderana dia hiantohana fa tsy mandika lalàna ianao.
Mizarà, mitahiry ary mahita amin'ny Trunk.ly
Fepetram-barotra 21 hanentanana / hanaitaitra ny mpiara-miasa aminao